Afrika, 01 January 2014
Ergo ka socota Kiir iyo Machar oo Kulmaya
Ethiopia ayaa sheegtey in dowladda Koonfuurta Sudan iyo madaxa mucaaradka, Riek Machar ay ergo u dirsanayaan mAddis Ababa si ay u wadahadlaan.
Kenya: Dab Weyn oo Qabsaday Xerada IFO
Dab xoog badab oo habeenkii xalay ahaa qabsaday suuqa weyn ee xarada IFO ayaa keenay khasaare laxaad leh oo dhinaca hantida ah, mana aha markii ugu horeysay ee uu dab ka kaco xeradan, hanti badanina ku baaba’do.
S. Sudan: Xoogag kusoo Fool leh Magaalada Bor
Ciidanka militariga ee dalka South Sudan ayaa sheegay in kumanaan dhalinyaro ah oo hubeysan, daacadna u ah madaxweyne kuxigeenkii xilka laga qaaday, Riek Machar ay kusoo jeedaan magaalada uu ciidanka dawladdu qabsaday ee Bor.
Martida iyo Madaxweynaha Djibouti
Barnaamijka Martida Makrafoonka waxaa marti noogu ah Madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti, Ismaaciil Cumar Geelle. Madaxweyne Geelle ayaa sheegay in dowladdiisu ay ciidamo dheeraad ah muddo 3 toddobaad ah ugu dirayso dalka Somalia.
AMISOM: Howlgal Ayaan Dhawaan Bilaabeynaa
Saraakiisha ciidamad AMISOM ayaa sheegay inay diyaargarow ugu jiraan inay kordhiyaan howlgalada sugida aminga guud ahaan gobolada Somalia
Dowladda Koonfuurta Sudan oo Aqbashey Xabbad Joojin
Dowladda Koonfuurta Sudan ayaa aqbashey xabbad joojin dalka ka dhaqangasha si loo soo afjaro dagaalada dalka ku faafaya.
Madaxda Geeska oo Dhexdhexaadin ka Wada K.Sudan
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo Raiisul Wasaaraha Ethiopia, Haile Mariam Desalegn ayaa socdaal ku tegey magaalada Juba,iyagoo la kulmay Madaxweyne Salva Kiir.
QM oo Qorsheynaysa in Ciidan la Geeyo S. Sudan
Xoghayaha Guud ee QM Ban Ki-moon ayaa weydiiyey Golaha Ammaanka in sida ugu dhakhsaha badan uu dalka South Sudan loogu diro ciidan nabad ilaalineed oo gaaraya 5,500. Ujeedada ciidanka ayaa ah in la ilaaliyo dadka shicibka ah.
Kiir: Wadahadal Ayaan la Galayaa, Machar
Madaxweynaha Koonfur Sudan Salva Kiir ayaa sheegay inuu doonayo inuu wada hadalo la yeesho Madaxweyne ku xigeenkii hore , ee dalkaasi Riek Machar, oo uu ku eedeynayo inuu ka dambeeyay af-gambi la doonay in xukunka looga rido.
Wasaaradda arrimaha gudaha Kenya ayaa sheegtay in ugu yaraan 4 qof ay dhinteen in kabadan 30-na ay ku dhaawacmeen qarax bambo gacmeed ah oo lagu tuuray baabuur bus ah xaafadda Easleight ee magaalada Nairobi.
In kabadan 80 hoggaamiye oo ka kala socda caalamka ayaa ka qeybgalaya xus tacsi ah oo loo sameynayo Nelson Mandela. Madaxda ka hadlaysa waxaa ka mid ah Obama, Castro iyo Roussef.
Obama oo ka Qeyb Galaya Xuska Mandela
Madax caalami ah oo uu ka mid yahay Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama iyo waliba madaxweynayaal hore ee Maraykanka ah ayaa ka qeyb galaya aaska madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika, Nelson Mandela.